galmada Archives - Page 17 of 17 - iftineducation.com
Raaxada Ku Jirta Galmada Cajiraha Haweenka Buuran waa ka daran tahay tan….
aadan21 / June 30, 2017
Cajiraha buuran ninka way soo jiitaan, gaar ahaan gabadha marka ay leedahay qurux saraysa, naaso waweyn dabo weyn timo dheer weji nuuraya, hadal macaan badan, cajiraha ama bawdaha galmadooda waa raaxaysi iyo istiin, qofka qaabka uu gabdha u jiifinayo ayay ku xiran tahay, gabdha marka ay seexato oo ay is qaawiso waxay isku dhejinaysaa labada cajar, markaas ninka wuxuu u…
Abaayo Hadii aad leedahay astaantaan Ragoo dhan Saf Dheer Ayay kuu Soo Galayaan.
Ragga ayaa ku kala dawan ka fakiradda iyo qaabka ay ku xulanayaan qofta ay doonayaan in ay xariirka la sameeyaan waxa ayna ka eegtaan dhinacyo ay ka mid yihiin. Isku kalsoonaanta: Ninka aad ayuu u Jecelyahay haweeneyda isku kalsoon, Isla markaana taqaana sida ay u qaadaneyso go’aanada iyadoo uusan saameyn ku yeelan rayiga dadka kale. Ragga haweeneydaas oo kale aad…
Haweenka dabada weyn kuma ficna nin gus yar waayo ma gaarsiin karo siilkooda, waxaa reebaya labada cajir, naag kasta dabo wen waxay leedahay cajiro buurbuuran, sidoo kale haddii ay foorarsato sida la rabay uma gaarsiin karo guska, foorarka qaabka ah waxaa keliya ku fiican nin geed dheer leh, hablaha qooq haddii uu hayo foorar ayaa looga keeni karaa biyaha, ninka…
Waxyaalahan haddaad ku riyooto maxaa dhacaya
aadan21 / June 21, 2017
Waxyaalahan haddaad ku riyooto maxaa dhacaya Riyada waxay leedahay waxyaalo dadka noloshooda la xiriira, marka aad wax aragto ama aad ku riyooto astaan ayuu u yahay waxyaalaha qaar. Hadii aad ku riyooyo digaag maxay tilmaamaysaa? digaag waxaa la dhahaa waxay tilmaantaa naag sharmuuto , qofkii arko ama ku riyoodo digaag oo saaran sariirtiisa gurigiisa waxaa soo galaya naag dhilo ah.…
Riyada saxda ah sideen ku garan karaa
Riyada saxda ah sideen ku garan karaa Qofka wuxuu arkaa marmar riyo cabsi badan oo uuna dadka u sheegi karin, marka uu arko aad buu uga walwalayaa riyadaas, aniga gaar ahaan waxaan isku arkay marka riyo cabsi leh aan arko igama tagto dhowr maalmood wxay ku sii jiraysaa maskaxdayda, waxaan ahay dadka riyada badan, sababo ma jiraan riyada keenaya
Sidee ku garan kartaa gabdhaha galmada ku waalan
Astaamaha naagaha jecel wasmada waa maxay wejigooda malaga ogaan karaa dumarka kacsiga leh? marka aad akhriso buugaagta ka hadashay raaxada guurka ama galmada waxay ka hadlaan astaamaha ama calaamadaha lagu ogan karo galmada naagaha raba, waxay sheegeen naagaha faruuraha waaweyn siiba faruurta kore waxay aad uga heshaa galmada, sidoo kale naagaha xaadada badan leh ama gacmaha timo ka leh ama…
calaamadaha lagu garto uurka cusub
aadan21 / June 20, 2017
Uurku wuxuu yimaada marka ay manida bacrimiso ugxanta laga soo daayay ugxan sidaha, ugxantu waxay soo martaa tuubada ugxan sidaha oo ah meesha bacrimiska uu ka dhaco. UUgxanta marka ay bacrismato waxay usoo gudubtaa minka oo ah meesha ay ku dhageyso. Marka ukunta bacrimisan si guul ah ay ku dhagto uur ku jirta waxaa meesha ka dhasha uur. Uurku waa hab socda mudo 40 todobaad.…
ka hortagida inaad uur qaado sir
Dhammaan aaladaha ka hor tagga uurku waxay kaa ilaalinayaan in aad qaaddo uur aadan doonayn. Kondhomtu waxay kaloo dheertahay in ay cudurradana kaa ilaalineyso. Wiilasha marka la eego fursadda keliya ee u bannaan weil waa kondhomta. Laakiin gabdhuhu fursado badan oo ay kala dooran karaan ayay haystaan. Mas’uuliyadda is ilaalinta waa mid la wadaago Ragga iyo dumarka labadaba mas’uuliyad ayaa…
aadan21 / June 19, 2017
Waxtarka malabka uu leeyahay ayaa waxay yihiin kuwa aad u fara bdan. Malabka ayaa waxaa uu u fiican yahaya wasmada. Waxaa si dhaqan ahaan loo isticmalaa inuu daaweeyo kasci la’aanta, dareemaha la’aanta/yaraadaan iyo galmada kaa soo yaraato. Malabka iyo Galmada Galmada ninka iyo naagtaba ayuu aad ugu fiican yahay. Wuxuu kaalmeyaa kacsiga, awooda wasmada iyo xiisada galmada. Waxaa u kordhiyaa…
QAABKA FOORARKA CAAFIMAAD AHAAN DHIB MA LEEYAHAY NINKA AMA NAAGTA
aadan21 / June 18, 2017
QAABKA FOORARKA CAAFIMAAD AHAAN DHIB MA LEEYAHAY NINKA AMA NAAGTA Galmada qaabab badan ayay leedahay, taas waxaa laga rabaa labada is qaba inay isku fahmaan, waxaad arkaysaa naago badan diidaya tusaale ahaan galmada foorarka, iyagoo ka xishoonaya qaabkan, waxay uga xishoodaan inta badan codka ka soo yeera naagta marka foorar loogu tago, codkaas wax dhib ah ma laha waa keliya…